National Account / Personal Account ဖွင့်လှစ်ပါက တင်ပြရန်လိုအပ်ချက်များ
နိုင်ငံခြားငွေ ရရှိကြောင်း အထောက်အထား
ကနဦးအပ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ 100 /
ယူရိုငွေကြေး 100 / စင်္ကာပူဒေါ်လာ 100
ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ
မိတ်ဆက်ထောက်ခံသူ (၂) ဦး
National Account / Personal Accout ဖွင့်လှစ်ရန် နမူနာပုံစံများ
Caption for the fourth image.
Embassy Account ဖွင့်လှစ်ပါက တင်ပြရန်လိုအပ်ချက်များ
သံရုံးမှ စာရင်းဖွင့်လှစ်ပေးရန် လျှောက်လွှာ
သံရုံး၏စာရင်းအား လက်မှတ်ရေးထိုးဆောင်ရွက်မည့်သူ၏ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နှင့် ဗီဇာမိတ္တူများ
ကနဦးအပ်ငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ /
ယူရိုငွေကြေး ၁၀၀ / စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
Embassy Accout ဖွင့်လှစ်ရန် နမူနာပုံစံများ
စာရင်းရှင်ဖွင့်ပြီးမှာသာ ပုံသေ အပ်နှံငွေစာရင်း
အနည်းဆုံး USD 1000/- ဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ရပါသည်။
ဗဟိုဘဏ်မှ အတိုးနှုန်းသတ်မှတ်၍ ယခုအထိ ၁ နှစ်လျှင် 1% အတိုးပေးပါသည်။
၆ လ အနည်းဆုံးထားရှိမှသာ အတိုးပေးပါသည်။
စာရင်းလွှဲပြောင်းခြင်း (Account Transfer ) အတွက် လိုအပ်ချက်များ
အစိုးရဌာနများသို့ စာရင်းပြောင်းပေးသွင်းခြင်းဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာန၏ အကြောင်းကြားစာ
စာရင်းပိုင်ရှင်၏ သဘောဆန္ဒအရ စာရင်းပိတ်ခြင်း
************* မှတ်ချက် ************
ကားဟောင်းဖျက်သိမ်းပြီးကားတင်သွင်းခွင့်ရရှိသူများ၊ပြည်ပသို့ပညာသင်ဆွေးနွေးပွဲသွားရောက်သူများ၊အစိုးရတာဝန်ဖြင့်ပြည်ပသို့သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သောဝန်ထမ်းများ၊ပြည်ပသို့အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူများ၊ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ဖြင့်ပြည်ပသို့သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများမှကားပါမစ်လျှောက်ထားခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားသင်္ဘောလိုင်းများတွင်လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းကွယ်လွန်သူများအတွက် နစ်နာ ကြေးထည့်သွင်းနိုင်ရေးအတွက်စာရင်းဖွင့်ရာတွင်ချွင်းချက်အနေဖြင့်ပိုမိုလျှင်မြန်လွယ်ကူစေရန်အတွက်မိတ်ဆက်ထောက်ခံချက် (၂) ဦးမပါဘဲ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ ဓါတ်ပုံ (၂) ပုံ၊ Deposit USD-100/-,SGD 100/- ဖြင့် နေ့ချင်းပြီးစာရင်းဖွင့်ဆောင်ရွက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ငွေစုဘဏ်စာရင်း( Savings Deposit Account )
- ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းအသက် ( ၁၈ )နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၂)	ဘဏ်မှသတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စာရင်းဖွင့်ခွင့် လျှောက်ထားရမည်။
(၃)	ကျပ်သိန်း (၁၀၀) အထက် အပ်နှံခြင်းဖြစ်လျှင် ဝင်ငွေရလမ်းဖော်ပြနိုင်ရမည်။ ဘဏ်မှ လိုအပ်ချက်တောင်းခံလျှင် အထောက်အထား တင်ပြနိုင်ရမည်။
ကနဦးအပ်နှံငွေ	 -	၁၀၀၀ ကျပ်
အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငေ -	၁၀၀၀ ကျပ်
အတိုးနှုန်း ( တစ်နှစ်လျှင် ) -	၈ %
အပ်ငွေကို လစဉ်လဆန်း ( ၁) ရက်နေ့မှ ( ၄ ) ရက်နေ့အတွင်း ပေးသွင်းနိုင်ပြီး လကုန်ရက် တွင်ကျန်ရှိသော အနည်းဆုံးလက်ကျန်ပေါ်တွင်တွက်ချက်၍ (၆) လလျှင်တစ်ကြိမ်အတိုး ထည့်သွင်း ပေးပါသည်။
ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်း ( Fixed Deposit Account )
-	ပုဂ္ဂလိက တစ်ဦးချင်းအသက် ( ၁၈ )နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
(၂)	MFTB တွင် ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ရန် အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ဘဏ်စာရင်းတွင် ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ဆောင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်( ၁ ) ဦး( သို့ ) တစ်ဦး ထက်ပိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များ
(၃)	ဘဏ်မှသတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ စာရင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်လျှောက်လွှာ ( သို့ ) ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်း၏ Letter Head ဖြင့် ငွေစုဘဏ်စာရင်း ဖွင့်လှစ်ခွင့်လျှောက်လွှာ
(၄)	ဘဏ်စာရင်းတွင် ငွေသွင်း/ငွေထုတ် ဆောင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်မူရင်း/မိတ္တူ
(၅)	ငွေစုဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခွင့်လျှောက်သောကာလနှင့် တဆက်တည်းဖြစ်သော ပြီးခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏ စာရင်းစစ်ဆေးပြီး ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်း
(၆)	အခွန်ကင်းရှင်းကြောင်း ( သို့ )အခွန်ထမ်းဆောင်ပြီးကြောင်း ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီး ဌာန၏ ထောက်ခံစာ ( ကျပ်သိန်း ( ၁၀၀ ) နှင့်အထက်ဖြစ်လျှင် )
အပ်နှံငွေ ( အနည်းဆုံး )
-	ကုမ္ပဏီ/အဖွဲ့အစည်း	-	၁,၀၀၀,၀၀၀	ကျပ်
- (၃) လအပ်နှံငွေပေါ်တွင် ၈.၂၅ %
- (၆) လအပ်နှံငွေပေါ်တွင် ၈.၅၀ %
- (၉) လအပ်နှံငွေပေါ်တွင် ၈.၇၅ %
ငွေစုစာအုပ် ( Savings Passbook )
ငွေစုဘဏ်စာရင်းပိုင်ရှင်တိုင်းအား ငွေသွင်း/ငွေထုတ်နှင့် လက်ကျန်ငွေတို့ကို အတည်ပြုထားသည့် ငွေစုစာအုပ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ငွေစုစာအုပ်မပါဘဲ ငွေထုတ် ခွင် မရှိပါ။
ငွေသွင်းခြင်း ( Deposit )
မိမိ Account ထဲသို့ ငွေသွင်းပါက မိမိကိုယ်တိုင် ငွေသွင်းနိုင်သည့်အပြင် ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် လည်း ငွေသွင်းနိုင်ပါသည်။ ငွေသွင်းတိုင်း ငွေစုစာအုပ်တင်ပြရမည်။
ငွေထုတ်ယူခြင်း ( Withdraw )
မိမိ Account ထဲရှိ ငွေကို မိမိကိုယ်တိုင် ထုတ်ယူနိုင်သည့်အပြင် ကိုယ်စားလှယ် ဖြင့်လည်း ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။ ငွေထုတ်ယူတိုင်း ငွေစုစာအုပ်နှင့် မှတ်ပုံတင်မူရင်းကို တင်ပြရမည်။ အပ်နှံငွေစာရင်းမှ ငွေထုတ်ယူခြင်းကို ရက်သတ္တတစ်ပတ်လျှင် တစ်ကြိမ်သာ ထုတ်ယူခွင့်ပြုပါမည်။
ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားသူများအား အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည် -
- ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်း အချိန်စေ့ရောက်သည့်နေ့တွင် ငွေအပ်နှံသူမှဘဏ်သို့ လာရောက်၍ ငွေသားပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
- ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်းကို အချိန်စေ့ရောက်တိုင်း သက်တမ်းတိုးပေးရန်နှင့် စာရင်းပိုင်ရှင်မှ ဘဏ်သို့ ညွှန်ကြားထားနိုင်ပါသည်။
- ပုံသေအပ်နှံငွေစာရင်းမှ အတိုးကို အတိုးငွေသာထုတ်ယူမည် (သို့) ငွေစုဘဏ် စာရင်းသို့ ထည့်သွင်းရမည်ကို စာရင်းပိုင်ရှင်မှဘဏ်သို့ ညွှန်ကြားထား နိုင်ပါသည်။
ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများမှာ -
- ငွေသားဖြင့် ပေးသွင်းခြင်း/ထုတ်ခြင်း
- စာရင်းပြောင်းပေးသွင်းခြင်း/ ထုတ်ခြင်း
- ချက်လက်မှတ်ဖြင့် ပေးသွင်းခြင်း/ ထုတ်ခြင်း
မှတ်ချက်။	ငွေသားဖြင့် ငွေပေးသွင်းခြင်းကို ကျပ်သိန်း (၁၀၀) အထိလည်းကောင်း၊ ကျပ်သိန်း (၁၀၀) အထက်ဖြစ်လျှင် ချက်လက်မှတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ဘဏ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော ကျပ်ငွေစာရင်းမှ စာရင်းလွှဲပြောင်းသည့် စနစ်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ CBM-NET ဖြင့်လည်းကောင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
MFTB ATM CARD ပြုလုပ်ရန်
- ATM Card Account ဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များဖြည့်သွင်း ရပါမည်။ Card ကိုင်ဆောင်သူသည် အသက်(၁၈)နှစ် ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရပါမည်။
- Customer မှ ဖြည့်သွင်းသောအချက်အလက်များအား ဘဏ်မှစစ်ဆေးကာ ATM Card Account ဖွင့်ပေးပါမည်။
ATM CARD အကျိုးကျေးဇူးများ
- မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ATM စက်များတွင် ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
- ငွေသားလက်ကျန်များအား စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
- ပစ္စည်းဝယ်ယူမှု့များအတွက် ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
- ATM Card အား (၂၄) နာရီ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- ATM Card အတွင်း ငွေသွင်းရန်မှအပ ဘဏ်သို့လာရောက်ရန် မလိုအပ်ပါ။
- MFTB ၏ ATM Card အချင်းချင်း MFTB ၏ATM များတွင် မိမိလွှဲပို့လိုသည့် ATM Card A/C No. သိရှိပါက အခြားATM Cardသို့ A/C Transfer ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ အများဆုံးလွှဲပို့နိုင် သည့်ငွေပမာဏမှာ ကျပ်(၅)သိန်း ဖြစ်ပါသည်။
ATM CARD အသုံးပြုသူများသိထားသင့်သည့်အချက်များ
- မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အား အသုံးပြု၍ ATM များ POS များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အား ATM စက်ရှိသည့်နေရာ၌ပင် ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
- MFTB ATM CARD အား MFTB ၏ ATM စက်များတွင်သာမက အခြားသော ဘဏ်များ၏ MPU တံဆိပ်ပါရှိသော ATM စက်များတွင်လည်း ငွေထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
- POS စနစ်ဖြင့် ငွေပေးချေနိုင်သောဆိုင်ကြီးများတွင် ATM Card ဖြင့် ဈေးဝယ် နိုင်ပါသည်။
- တစ်ကြိမ်ထုတ်ယူပါက အများဆုံး (၃)သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်၊
- နေ့စဉ်ငွေကျပ်(၁၀)သိန်းအထိ ထုတ်ယူနိုင်ပါသည်။
- MFTB ATM Card အား MFTB ၏ ATM တွင် ငွေထုတ်ယူခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
- အခြားဘဏ်များ၏ ATM စက်များတွင် ငွေထုတ်ယူမှသာ ဝန်ဆောင်ခ ၀.၂၀% ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ (ဥပမာ-ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀/- ထုတ်ယူပါက ကျပ်၂၀/- ပေးဆောင်ရမည်။)
- POS များတွင် အသုံးပြုခြင်းအတွက် ဝန်ဆောင်ခ ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။
- ဘဏ်မှCard ထုတ်ယူပြီးပါက မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အားပထမအကြိမ် မဖြစ်မနေ MFTB ATM စက်တွင် ဦးစွာရိုက်ထည့်၍ ပြောင်းလဲထားပါ။
- ATM စက်မှ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပါ။
- မိမိလျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) သည် အထူးအရေးကြီး၍ မိမိမှအပ သူတစ်ပါးအား အသိပေးခြင်း မပြုလုပ်ရ။
- မိမိ Card အား သူတစ်ပါးသို့ ငှားရမ်းခြင်းမပြုရ။
- ATM Card အား ATM စက်တွင်အသုံးပြုပါက မိမိ၏လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No) အားမှန်ကန်စွာ ရိုက်နှိပ်ပါ။သုံးကြိမ်မှားယွင်းပါက Card အား ATM စက်မှ သိမ်းဆည်းသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
- ATM Card ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အခိုးခံရခြင်း၊ လျှို့ဝှက်နံပါတ် (Pin No)မေ့ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်း၊ မိမိ Card အားစက်မှ သိမ်းယူခြင်း၊ Card ပိုင်ရှင်ကွယ်လွန်ခြင်း စသည်များကြုံတွေ့ရပါက ဘဏ်သို့ အကြောင်းကြားရပါမည်။
- အကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲ တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါက မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။
- ATM စက်မှ ငွေထုတ်ယူရာတွင် ငွေသားနှင့်Card အား သေချာစွာသိမ်းဆည်းပြီးမှသာ စက်အနီးမှ ထွက်ခွာပါ။
- နိုင်ငံခြားငွေAccount ရှိသူများမှ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့်ထုတ်ယူလိုပါက ထုတ်ယူမည့် နိုင်ငံခြားငွေအား Exchange Rate ဖြင့်တွက်ချက်၍ ATM Card Account ဖွင့်လှစ်ထားပါက Transfer ဖြင့် ဖြည့်တင်းပေးပါမည်။
- ATM Card Account ကိုတစ်ဦးတည်း အမည်ဖြင့်သာ ဖွင့်လှစ်ခွင့်ရှိပါသည်။ တွဲဖက်စာရင်း ဖွင့်ခွင့်မပြုပါ။
OK$ နှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်တို့ ပူးပေါင်း၍ ငွေသွင်းငွေထုတ် ပြုလုပ်မှုများကို ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပြီ ဖြစ်ပါကြောင်း
- မြန်မာ့နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် Internet Wallet Myanmar Ltd တို့အကြား OK$ ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၏ Pin No. Password နှင့် ဖုန်းနံပါတ်အား အသုံးပြုသည့်စနစ် ဖြင့်သာ Cash In, Cash Out ပြုလုပ်ခြင်းကို (၂၄-၁-၂၀၁၉) ရက်နေ့မှစ၍ ငွေသားဖြင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
- OK$ Mobile Payment ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်ခနှုန်းထားများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျပ်ငွေသွင်းခြင်း (Cash-In) အတွက် Transaction (၁) ကြိမ်လျှင်	ကျပ် ၂၀၀/-
ကျပ်ငွေထုတ်ခြင်း (Cash-Out) အတွက် Transaction (၁) ကြိမ်လျှင်	ကျပ် ၅၀၀/-
- ငွေသွင်းဝန်ဆောင်မှု အကောင့်(၁)ခုကို တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀.၀၀/- ခွင့်ပြုခြင်း
- ငွေထုတ်ဝန်ဆောင်မှု အကောင့်(၁)ခုကို တစ်ရက်လျှင် ကျပ် ၁,၀၀၀,၀၀၀.၀၀/- ခွင့်ပြုခြင်း
- OK$ Mobile Payment လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုအား အစိုးရရုံးဖွင့်ရက် Banking Hour အတွင်း ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။